Tsvangirai demands vote tallies
Lawyers for Zimbabwe’s opposition leader say they have filed a court suit to try to compel the state election commission to release full details of the disputed July 31 election.
ZIMBABWE’s MDC party, shocked by its overwhelming election defeat, has a battle on its hands to convince supporters it has any chance of taking power in the years to come.
Mugabe set for seventh term after ‘stolen’ vote
Robert Mugabe looked to a seventh term in power in Zimbabwe after winning elections denounced by the opposition as “stolen” and criticised by Western powers.
Western leaders dispute 'landslide' Mugabe election victory
Zimbabwe’s electoral panel declared that President Robert Mugabe has won re-election by a landslide, a result that could exacerbate tensions in the country.
Mugabe officially claims victory in Zimbabwe election
President Robert Mugabe won the Zimbabwe presidential election with 61% of the vote, compared to 34% for challenger Morgan Tsvangirai, election officials said.
Mugabe's party withdraw claim of Zimbabwe election victory
Robert Mugabe’s party says it has withdrawn an unauthorised message on its Twitter feed claiming a resounding victory in Zimbabwe’s national elections.
Mugabe 'will accept vote results'
Zimbabwean prime minister Morgan Tsvangirai says long-time ruler Robert Mugabe is ready to give up power if he loses the next election.
Mugabe pleads for end to violence in Zimbabwe
Zimbabwe’s president, appearing uncharacteristically conciliatory, said political violence must be “buried in the past” to move the nation toward free and unhindered elections.
Zimbabwe evictions 'forced children into sex industry'
Mass evictions in Zimbabwe six years ago have left thousands of displaced children without education and even forced some to seek work in the sex industry to support their families, rights group Amnesty International said today.
Mugabe health could spark crisis
The failing health of Zimbabwe's President Robert Mugabe could jeopardise efforts to resolve his nation's political crisis, South Africa's ruling party said.
Zimbabwe PM accused of 'uprising' bid
Zimbabwe’s prime minister has been accused by state-run radio of trying to spark anti-government uprisings similar to those seen in Tunisia and Egypt.
Zimbabwe’s prime minister filed a lawsuit against President Robert Mugabe today, alleging he violated the constitution and a power-sharing agreement.
World trading group bans Zimbabwe diamonds
Zimbabwe PM's aide acquitted on terror charges
A judge today acquitted a senior prime minister’s aide of all charges in a terrorism case that had strained Zimbabwe’s struggling coalition government since it was forged more than a year ago.
Mugabe begins bid to regain absolute power
Zimbabwe’s president Robert Mugabe said he planned to regain his hold over the country he has ruled for nearly three decades.
Mugabe banned me, says UN torture inquiry leader
The United Nations’ torture investigator blamed Zimbabwe’s president Robert Mugabe for banning him from entering the country today.
Zimbabwe police raid Tsvangirai aides' house
Zimbabwe police raided a house used by executives of prime minister Morgan Tsvangirai’s party, saying they were searching for weapons, the country’s finance minister said today.
Tsvangirai pulls out temporarily from coalition government
ZIMBABWE’S prime minister yesterday withdrew, at least temporarily, from a coalition government with hard-line President Robert Mugabe, setting back already troubled efforts to end Zimbabwe’s political and economic crises and international isolation.
Tsvangirai snubs Mugabe over Aide's 'show trial'
Zimbabwe’s prime minister is to boycott the country’s troubled unity government over the “persecution” of a top aide being tried on trumped up coup charges.
Attempts to end Zimbabwe feuding
IN a bid to end feuding between Zimbabwe’s coalition partners, South African president Jacob Zuma met president Robert Mugabe and other leaders and appeared cautiously optimistic that their differences could be resolved.
Tsvangirai takes salute from Mugabe's hard-line generals
Zimbabwean generals, known as hard-line supporters of President Robert Mugabe, today saluted former opposition leader Morgan Tsvangirai.
Tsvangirai makes fun of Brown during US visit
Zimbabwe’s prime minister Morgan Tsvangirai has made fun of British Prime Minister Gordon Brown’s flagging political fortunes during a visit to the US.
Tsvangirai urges sceptics to drop anti-Mugabe stance
In an impassioned appeal, Zimbabwe’s long-suffering Prime Minister Morgan Tsvangirai called for people to get over their obsession with his long-time enemy, President Robert Mugabe.
Church service for Tsvangirai's wife
A small church service was under way in Zimbabwe today for the wife of Prime Minister Morgan Tsvangirai, who was killed in a car crash last week.
Tsvangirai returns to Zimbabwe after crash
Zimbabwe’s prime minister was heading home to resume his duties today after receiving medical treatment in Botswana.
Mugabe sends message to rival after crash
Zimbabwe’s president Robert Mugabe has sent prime minister Morgan Tsvangirai’s family condolences after his wife was killed in a crash, state radio reported tonight.
Injured leader leaves hospital after crash
Zimbabwean prime minister Morgan Tsvangirai today left the hospital where he was treated after a car crash that killed his wife.
Tsvangirai may leave hospital
Crash injures Tsvangirai, kills wife
Zimbabwean prime minister Morgan Tsvangirai was injured in a car crash on the outskirts of the capital today and his wife was killed, officials said.
The wife of Zimbabwe’s Prime Minister Morgan Tsvangirai was killed in a car crash today.
Mugabe celebrates birthday while his people starve
Zimbabwean President Robert Mugabe said today that land seizures would continue, and he called for the country’s last white farmers to leave.
Lavish bash marks Mugabe's 85th birthday
Zimbabwean President Robert Mugabe is celebrating his 85th birthday with a lavish bash while the new unity government tries to raise funds to rescue the country’s collapsed economy.
Zimbabwe power-share plea
PRIME Minister Morgan Tsvangirai yesterday said a national unity government was “the only way out” of Zimbabwe’s crises and urged the international community to support it.
Tsvangirai aide charged with treason
A leading aide of Zimbabwe prime minister Morgan Tsvangirai was charged with terrorism today in what was widely seen as a plot to wreck the country’s new coalition government.